तपाइँको ब्लगमा शीर्षकमा रहिरहनु भएको छ? तपाईंको ट्याग क्लाउड हेर्नको लागि प्रयोग गर्नुहोस् Martech Zone
तपाईको ब्लगमा शीर्षकमा रहिरहनु भएको छ? हेर्नको लागि तपाईंको ट्याग क्लाउड प्रयोग गर्नुहोस्
शनिबार, सेप्टेम्बर 2, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब म अन्य साइटहरू भ्रमण गर्दछु, म उनीहरूको ट्याग क्लाउडमा विरलै हेर्दछु। म निश्चित छु किनकी छैन, म अनुमान गर्छु कि म प्रायः त्यहाँ छु किनभने मैले त्यहाँ आफूलाई एक सन्दर्भ मार्फत भेट्टाएको हो वा शीर्षक वा क्याप्सन मेरोलागि चासो थियो।
यद्यपि मलाई लाग्छ कि ब्लगर्सले आफ्नो ब्लगको ट्याग क्लाउडमा ध्यान दिन महत्वपूर्ण छ। तपाईं मेरो ट्याग क्लाउड "ट्यागहरू" अन्तर्गत साइडबारमा देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा मैले सामग्रीमा राख्ने राम्रो काम गरिरहेको छु, किनभने मेरो क्लाउड सन्दर्भ व्यापार, मार्केटिङ, र प्रविधिको। यो वास्तवमै मेरो ब्लगको सामग्री राख्न चाहन्थ्यो त्यसैले मैले सोचे कि म एक राम्रो राम्रो काम गर्दैछु।
ट्याग क्लाउड (अधिक परम्परागत रूपमा दृश्य डिजाइनको क्षेत्रमा भारित सूचीको रूपमा परिचित) वेबसाइटमा प्रयोग गरिएको सामग्री ट्यागको दृश्य चित्रण हो। प्राय: जसो प्रायः प्रयोग हुने ट्यागहरू ठूलो फन्टमा चित्रित गरिन्छ वा अन्यथा जोड दिइन्छ, जबकि प्रदर्शित अर्डर सामान्य रूपमा वर्णमाला हुन्छ। यसैले दुबै वर्णमाला र लोकप्रियता द्वारा ट्याग खोज्न सम्भव छ। ट्याग क्लाउड बीचमा एकल ट्याग चयन गर्दा सामान्यतया आइटमको संग्रहमा जान्छ जुन त्यो ट्यागसँग सम्बन्धित छ। - विकिपीडिया
तपाइँको ट्याग क्लाउडमा ध्यान दिनुहोस्, यसले तपाइँ सामग्रीमा रहिरहनुभएको छ वा छैन भनेर जानकारी प्रदान गर्दछ। केहि ट्याग क्लाउडहरूमा एक नजर लिनुहोस् र हेर्नुहोस् कि यी साइटहरू सामग्रीमा रहेका छन् कि छैनन्।
एक सूची बाहेक
मेरो बाहेक, यी केहि धेरै सफल ब्लगका उदाहरणहरू छन्। जब तपाईं ब्लगको परिभाषासँग ट्याग क्लाउड तुलना गर्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरू बीच पूर्ण सममेट्री फेला पार्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ यदि तपाइँको ट्याग क्लाउडले आगन्तुकलाई तपाइँको ब्ल्गको बारेमा वास्तवमा के हुन्छ भनेर बुझाउन प्रदान गर्दैन भने, त्यसोभए तपाईले आफ्नो फोकस समायोजित गर्नुपर्दछ, वा तपाइँ कसरी आफ्नो ब्ल्ग वर्णन गर्नुहुन्छ र परिभाषित गर्नुहुन्छ समायोजन गर्नुपर्दछ।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 2::2006० अपराह्न
धेरै राम्रो पोष्ट - मेरो ट्याग क्लाउडमा हेर्दै, सबै ठाउँमा सबै स्थानहरू 😆
तपाईं यहाँ एक डग्लस महान साइट छ, यसलाई जारी राख्नुहोस्!
नोभेम्बर,, २०१ at 14::2006 बिहान
म कुनै तरिका मा क्लिक थ्रस बाट तपाइँको साइट मा अवतरण र यो लेख धेरै उपयोगी थियो मात्र भन्न दिनुहोस्। नयाँ ब्लगरको रूपमा, त्यहाँ सबै SEO विचारहरूको साथ राख्न गाह्रो छ। डाइजेस्टेबल ढाँचामा यसलाई कन्स्यान्स् गर्नु भएकोमा धन्यवाद। अब यदि मैले मेरो वेब यूआरएलको साथमा एउटा टिप्पणी छोड्दा ट्र्याकब्याकको रूपमा समान महसुस गर्छु भने?
मैले यस साइटमा ट्याग क्लाउड थपेको छु।
मई 28, 2007 मा 10: 03 PM
धेरै उपयोगी जानकारी। तर के एक ट्याग क्लाउड एक आर्केड साइटको लागि काम गर्दछ?